Topnepalnews.com | महन्थ ठाकुरको ६० लाख रुपैयाँ सहित 'ब्रिफकेस' चोरी, कहाँबाट आयो यत्रो पैसा ?
महन्थ ठाकुरको ६० लाख रुपैयाँ सहित 'ब्रिफकेस' चोरी, कहाँबाट आयो यत्रो पैसा ?
Posted on: September 13, 2016 | views: 987
तराईका जनताको नाममा मधेश केन्द्रित पार्टी खोलेर राजनीति गर्दै आएका नेता हुन् महन्थ ठाकुर । उनै महन्थ ठाकुरको घरबाट ६० लाख रुपैयाँ सहितको 'ब्रिफकेस' चोरी भएको छ ।
तराईका सोझा सिधा नागरिकलाई अधिकार, र संविधानको नाममा नेपाली नागरिकता लिएका भारतीयलाई बढी अधिकारी दिनुपर्ने माग गर्दै भावी राजनीति सुरक्षित राख्नेगरि संघियता माग्दै आएका उनै ठाकुरले ब्रिफकेस चोरी हुँदा ५० ६० हजार चोरीएको भनेपनि घटनाको वास्तविकता सार्वजनिक हुन पुगेको हो ।
रोचक कुरा त के भने ६० लाख सहितको ब्रिफकेस चोरी भएपछि तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष रहेका महन्थ ठाकुर यतिबेला आफ्नै निवासमा बस्दैनन् ।
गत शुक्रबार भक्तपुर सानोठिमीस्थित आफ्नो निवासमा चोरी भएपछि उनी अहिले सम्धी उमाकान्त झाको अनामनगरस्थित घरमा बस्दै आएका छन् ।
पैसा सहितको ब्रिफकेस चारी हुँदा चोरसँग प्रतिकार गर्दा ठाकुरकी छोरी डा.मिनाक्षी घाइते भएकी थिइन् । श्रीमान् एमडी अध्ययनका लागि फिलिपिन्स गएकाले मिनाक्षी बाबुसँगै बस्दै आएकी थिइन् । अहिले मिनाक्षीले बाबुलाई आफ्नै घरमा ल्याएर राखेकी छन् ।
तमलोपा अध्यक्ष ठाकुर सँधैजसो एउटा ब्रिफकेस बोकेर हिँड्ने गर्थे । घरमा पनि सो ब्रिफकेस सिरानीमै हुन्थ्यो । उनी जहाँ जाँदा पनि त्यो ब्रिफकेस छोड्दैनथे ।
उनले जहिले ब्रिफकेस बोक्नुको रहस्य चाहिँ यसको चोरी पछि खुल्यो । नजिकका कार्यकर्ता र आसेपासेले पैसा माग्दा त्यही ब्रिफकेसबाट दिनेगरेका ठाकुर दशौं लाख लुटिएपछि रन्थनिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट फोन आएपछि घरमा छोरीको जिम्मामा ब्रिफकेस छाडेर बालुवाटार गएको केहीबरेमा ठाकुरको निवासबाट रकम चोरी भएको हो ।
चोरले ब्रिफकेस लुटेर भाग्न लाग्दा छोरी मिनाक्षीले प्रतिवाद गरेपनि जोगाउन सकिनन् खोसाखोसमा उनलाई सामान्य चोट समेत लागेको छ ।
यहाँ अर्को रोचक कुरा के भने ठाकुरको ६० लाखको ब्रिफकेस चोरी गर्ने व्यक्ति सर्लाही सलमपुर घर भएका यादव थरका व्यक्ति हुन् । उनी यसअघि ठाकुरका भान्से र ड्राइभर रहिसकेका व्यक्ति हुन् ।
ठाकुरको दुई÷चार लाख चोरी गरेको आरोप यसअघिनै लागेका उनलाई यस्तै गतिविधि गरेपछि ठाकुरले निकालिदिएका थिए ।
ठाकुरको दशौं लाखको ब्रिफकेशबारे जानकार रहेका उनै यादव शुक्रबार ब्रिफकेस चोरेपछि सम्पर्क बिहिन छन् । प्रहरीले ब्रिफकेस र फरार व्यक्तिको खोजि अनुसन्धान थालेको बताएको छ ।
महन्थ ठाकुरले बाहिर ५० ६० हजार भन्दै ढांटेपनि पार्टीको र भएको रकम सबै त्यही ब्रिफकेसमा रहेको भन्दै ६० लाख सहितको ब्रिफकेस हराएको पार्टीका नेताहरुलाई बताएका छन् ।
भारत निकट रहेका ठाकुरसँग यत्रो रकम कहाँबाट आयो ? तराईका जनता बाढीबाट पीडित बनिरहँदा बेखवर बनेर राजधानीको सुखसयलमा बसिरहेका महन्थ ठाकुरलाई तराईवासी सहित सबै नेपाली नागरिकले ६० लाखको श्रोत खोज्नुपर्ने भएको छ ।